Dhibaatooyinka Maskaxda iyo Horumarka
NAGU SAABSAN ︎
Fikirka iyo Dareenka
Man iyo Naag iyo Cunug
Dimoqraadiyadda waa Is-Xukuumad
Masonry iyo Calaamadihiisa
Fursadaha leh saaxiibo
Raadi goobta Word Foundation
Ka raadi tifaftirayaasha majaladda Word
Waxaa jira afar nooc oo maskaxeed. Miisaanka jirku wuxuu ku xiran yahay nafta jir-naasaha iyo nafta jinsiga, in uu u galmoodo isubi iyo succubi iyo in uu jidhkiisa jeexan yahay. Miyir-jabka maskaxdu way muuqanaysaa waxayna isticmaashaa jimicsi maskaxeed oo hooseeya. Maskaxiyan maskaxdu waxay gaarsiisaa maskaxda maskaxda sare, laakiin maskaxiyan ruuxi ah kali way ogyahay oo leedahay awooda waxsii sheegista iyo awooda la doonayo.
Vol. 7 JUNE, 1908. No. 3
Xuquuqda, 1908, by HW PERCIVAL.
HORUMARKA PSYCHIC AND DEVELOPMENT.
Noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan waxay u muuqdaan da 'kasta. Cudurrada faafa badan ayaa na soo booqday, oo ay ka mid yihiin cudurrada faafa ee maskaxda. Cudurka maskaxdu wuxuu ku faafaa marka dad badan oo bulshada ka mid ah ay ku darsamaan dabeecadda dadka ee u muuqda kuwa aan qarsoodi ahayn, waxayna la macaamilaan maadooyinkaas, sida farriinta, riyadu, riyooyin, aragti, isgaadhsiinta caalamka aan la arki karin, iyo isgaadhsiinta oo la caabudo kuwii dhintay. Caabuqyadaas, sida dhaqdhaqaaqa kale, waxay yimaadaan wareegyo ama hirar. Marka ay si wanaagsan u socdaan waxaa jira muuqaal guud oo ka dhex jira dadka si ay u horumariyaan ciyaaraha ama sida cilmi nafsiga iyo cilmu-nafsiga. Dad kala duwan, xaaladaha kala duwan ee cimilada, deegaanka iyo muddada cayiman ama muddada wakhtiga ah ayaa keena wejiyada kala duwan ee maskaxda.
Iyadoo ay ugu wacan tahay casriga casriga ah ee cilmiga sayniska, daraasadda cilmi nafsiga, sayniska nafsadda, ayaa la cambaareynayey iyo wixii soo jeedin ah ee ku saabsan lahaanshaha, horumarka ama rabitaanka barashada cilmiga maskaxda ee cilmi-nafsiga la jees jeeso iyo quudhsan. Haddii qofku haysto jimicsi maskaxeed, ama uu aaminsan yahay horumarkiisa, waxa loo tixgeliyay fikradaha adag in uu noqdo mid been-abuur ah, munaafiqnimo, ama maskax ahaan aan ku haboonayn ama nacas. Qaar ka mid ah dadka fikradaha ugu liita ee ku faraxsan inay baaritaan ku sameyn lahaayeen cilmi-nafsiga iyo cilmi-nafsiga ma ahan mid xoogan oo ka soo horjeeda hubka jeesjeeska iyo quudhsiga, sida ay u isticmaalaan saaxiibadood.
Laakiin wareegga ayaa loo rogay. Maaddada sayniska waxay leedahay culays weyn oo bilowday in ay baaritaan ku sameyso isirrada maskaxda ee manka. Hadda waxay u eg tahay dadka inay noqdaan kuwo maskaxiyan: si ay u arkaan, uriso oo ay u maqlaan waxyaabo qariib ah, iyo inay dareemaan carqalad iyo naxdin leh. Tani waa falcelin degdeg ah oo ka timaadda wax-soo-saarka casriga ah, laakiin ugu horreyntii waxay ku xiran tahay xilli, wareegga ama mudada aan ku soo galnay. Qaab-dhismeedkani waxa uu keenayaa jiritaanka jidhka ee qofku inuu noqdo mid u nugul saameynta caalamadaha aan la arki karin ee ku wareegsan oo aan soo saari karin adduunkeena jir ahaaneed, inkastoo duniyadani ay yihiin sidii ay ahaayeen ka hor intaanay jirkoodu ka jawaabin.
Wixii waayihii hore ee maskaxda bini'aadamka ayaa ujeedadoodu ahayd ujeedooyinka iyo walxaha kuwaas oo ku jiray maaddada dabiiciga ah; laakiin tan iyo qaybtii dambe ee qarnigii sagaalaad maskaxda ayaa loo jeediyay khadadka cusub, fikradaha iyo rabitaanka cusub. Waxaa la tilmaamay in ay jiraan dunidu hirgelisay oo laga yaabo in lagu furo nin. Waxaa la muujiyey inay jiraan fursado horumarineed oo ka baxsan wax kasta oo uu u arkayey inuu isku dayayo inuu isku dayo ama la helo.
Natiijada fekerkaas oo kale, bulshooyin badan ayaa loo sameeyay daraasadda iyo cilmi baarista arrimaha maskaxda. Qaar ka mid ah bulshooyinkan waxay baraan oo ay dhiirrigeliyaan horumarinta jimicsiga maskaxda. Qaarkood waxay ka sameeyaan ganacsi, iyo qaar ka mid ah hanti ku filan oo ay dadku isku dayaan in ay haystaan ​​oo ay u dhiibaan awoodaha iyo aqoonta ay iyagu leeyihiin.
Laakiin dareenka maskaxeed kuma koobna bulshooyinka si gaar ah loogu habeeyey daraasaddan iyo tababarkan. Ruxruxa maskaxdu waxa uu saameeyay jirdil diimeed sida ay leedahay kuwa aan si gaar ah u daneynin diinta. Xaqiiqdii, diintu waxay mar walba ku tiirsan tahay dabeecadda maskaxda iyo rabitaanka dadka ee xooggiisa iyo awooda maskaxdiisa. Ka dib waxbarashadii ugu horaysay ee asaasiga ah ee asaasiga ah iyo asxaabtiisaba waxa soo saarey sharciyo adag oo degdeg ah iyo dhaqdhaqaaqyo, kuwaas oo lagu soo rogay dadka. Taageerayaasha Diinta gaar ahaaneed waxay inta badan ka tageen macallinkooda runta ah si ay ula socdaan kuwa raacsan, si ay u dhisaan kaniisad iyo inay kordhiyaan awoodda kaniisadda. Si arrintan loo sameeyo waxay sababeen sababo iyo rafcaan u ah dabeecadda maskaxda ee qofka. Waxay marka hore kiciyeen dabiiciga maskaxeed waxayna ku dhufteen dhibtiisa, ka dibna waa la xakameeyay oo uu addoonkiisa ku xidhay. Way adagtahay in la xakameeyo ninkaas habka garashada. Maskaxdu marnaba laguma addoonsan karo rafcaan u sabab ah. Diinta marwalba waxay maamushaa nin adoo ku daboolaya dabiiciga maskaxeed.
Marka dhaqdhaqaaq ruuxi ah la bilaabay waxaa badanaa la socda dabeecadaheeda si ay u jahawareeraan dhaqanka maskaxda. Haddii dhaqamada noocan oo kale ah ay indho-indhod yihiin kahor xubnaha xubno ka mid ah jirkani jidh ahaan, maskax ahaan iyo maskax ahaanba si ay u bilaabaan caadooyinka, carqaladaynta iyo jahawareerka iyo dhacdooyinka kale ee nasiib-darrada ah waxay keeni doonaan natiijo. Waxaa laga yaabaa in ay wanaagsan tahay in la yiraahdo erayo yar oo ku saabsan hindisaha maskaxiyan maskaxeed iyo hadafka ruuxiga ah ee hadda muuqata.
Mawjada maskaxeed ee hadda ka gudubtay adduunka ayaa bilaabay qaybtii dambe ee qarnigii la soo dhaafay. Qayb ka mid ah mid ka mid ah Dawladaha New England waxaa jirey dillaaca jinni, ka dibna wuxuu u muuqday inuu yahay arrin maxalli ah. Laakiin jimicsigu waa mid ka mid ah wejiga maskaxeed. Dareenka maskaxeed ayaa dhab ahaantii laga soo raray New York by Madam Blavatsky, oo sameeyey Ururka Bulshada, 1875. Jaaliyadda Theosophical waxaa sameeyay Madame Blavatsky oo ah qalab shaqeed kaas oo Theosophy la siin lahaa adduunka. Bulshada qadiooliga ah waxay ka kooban tahay raga iyo dumarka da'doodu tahay, halka Theosophy waa xigmadda da'da. Iyadoo loo marayo Bulshada Theosofiyada waxaa soo bandhigay Madam Blavatsky waxbarashooyinka qaaska ah. Barashooyinkan waxay khuseeyaan mawduucyada ka hadlaya miisaaniyadda oo dhan oo lagu soo bandhigay dhibaatooyinka caalamiga ah ee reer Galbeedka ka hor inta aan la tixgelinin. Waxay khuseeyaan arrimaha arimaha madaniga ah iyo sidoo kale ujeeddooyinka iyo niyadda ruuxa iyo ra'yiga. Hase yeeshee, Madam Blavatsly waxaa laga yaabaa inay u muuqato dad, qaar ka mid ah waxbarashooyinka ay soo qaadatay waxay u qalantaa tixgelinta ugu wayn iyo fikirka.
Jaaliyado badan oo hadda ku hawlan arrimaha arrimaha maskaxda, iyo horumarinta maskaxeed iyo ruuxaba, waxay heleen xaqiiqda dhabta ah ee ku jirta Bulshada Theosophical. Bulshada qadiimiga ah waxay suurtogal u tahay in wakiilada jinsiyado iyo diimo kale ay u yimaaddaan dunida galbeed iyo in ay dadka u soo bandhigaan caqiidooyinkooda kala duwan. Dadka reer galbeedka ee aan u dulqaadan doonin ama diinta diinta kale ee aan ahayn iyaga ayaa ahaa, sababo la xidhiidha waxbarashooyinka qadiimka ah ee qadiimka ah, oo danaynaya oo diyaariyay inay wax ka qabtaan "quruumaha." Jinsiyadaha bari waxay yimaadeen, waxay dhagaysteen maqalka Galbeedka. Hadday noqoto inay faa'iido u leedahay galbeedka waxay ku xirnaan doontaa macnaha baraha baraha bariga, daacadnimada bandhigida caqiidooyinkooda, iyo nadiifinta nolosha.
Ka dib markii uu Madam Blavatsky ka gudbo, Ururka Jaalliyadaha Asluubtu waxay ahayd waqti gaabis ah oo lagu tuuray jahwareerkii Madam Blavatsky uu kula taliyay: kala qaybinta iyo kala go'a. Xitaa markaa, inkasta oo jaaliyadu ay u kala qaybsantay, waxbaristu waxay ahayd isku mid. Hase yeeshee, inta ay socdaan, waxbarashooyinka qaarkood ayaa waxoogaa isbedelaya. Iyada oo kala qaybsanaan la sii waday, waxaa sidoo kale jira faragelin ficil ahaaneed iyo mid maskaxeed oo ka mid ah waxbarista iyo ujeedka dhaqanka maskaxda. Jaaliyadda Tawfishiga ah ma noqon karto mid ka reeban sharciga: haddii xubnahoodu ay sii wadaan in ay u hoggaansamaan dareenka maskaxeed, waxay la mid yihiin jirro kale oo la mid ah kuwii hore, waxay u jaheyn doonaan anshax ahaan, maskax ahaan iyo jidh ahaanba, waxayna ku dhammaanayaan jahwareer iyo cay. Waxaa jira hal suurtagal oo kale: haddii qaar ka mid ah caqli-galnimada awoodda ay tahay in la kantaroolo mid ka mid ah jahawareeriyada haatan ee jira ee uu awood u leeyahay inuu adeegsado falsafadda macallimiinta isbeddelka noocaas ah ee laga yaabo in uu ku haboonaan karo, iyo, kiniisadda ama madaxda sare. Kooraska noocan oo kale ah waxay noqon kartaa nasiib darro bani-aadmiga oo ah awoodda, iyada oo loo marayo hanti-meeraha, waxay lahaan laheyd oo heysata oo maskaxda ku haysaa maskaxda aadanaha xitaa in ka badan diimaha hore ama hadda. Jaaliyada Theosophical waxay qabteen shaqo weyn oo ay ku bixiyaan qayb ka mid ah Theosophy aduunka, laakiin waxay noqon kartaa mid aad u fiicnaan lahayd in mid kasta oo ka mid ah bulshadiisu ay shaabadeeyn jirtey jiritaanka marka loo eego dhammaan ama qayb kasta oo ka mid ah inay noqoto habaar dad sidii loo abuuri lahaa mid ka mid ah ururada loo yaqaan 'spiritual spirit' oo ka mid ah xubnihiisa iyada oo la wada socdo daciifnimada aadanaha iyo cilladaha.
Jinsiyadaha kale, tusaale ahaan, Giriigta, Masar, iyo Hindiya, ayaa cilmi-nafsi ahaan loo adeegsaday wadaaddada. Dhaqankooda waxaa loo adeegsaday erayo, loogu talagalay leexashada, helitaanka, daaweynta cudurrada iyo isgaadhsiinta awoodaha aan la arki karin. Noocyada dhaqanka ee aan u leenahay waxa loo isticmaalay ujeedooyin la mid ah, laakiin si gaar ah ayaa loo adeegsadaa dadka doonaya, inay soo saaraan dareenka, iyo inay u diyaargaroobaan rabitaanka aan caadiga ahayn ee udgoonayaasha tijaabada ah iyo inay la yaabaan kuwa jecel.
Hase yeeshee, miyirka maskaxda ee ku wajahan xadaaradeena, haddii loo jeesto jihada saxda ah ee la xakameynayo, ayaa naga caawin doonta sidii loo dhisi lahaa ilbaxnimo weyn oo xajin leh oo ka sii wanaagsan kuwii hore. Dhinaca kale, dareenka maskaxdu waxa laga yaabaa in ay hurdaan burburkayaga iyo taariikhdeena keeno rabitaan ku filan oo lacag ah, jacaylka raaxada ah, ama jahwareer leh oo cibaadaysanaya iyo cibaadada dadka dhintay. Midabkani waa in uu ka weyn yahay kuwa kale sababtoo ah jirdilka jireed ee dadka, waxay ku haboonaan karaan xaaladaha, awooda ay u leeyihiin inay isbeddelaan xaaladaha, waxtarkooda, u diyaargarow inay ku qabtaan oo ay sameeyaan xaaladaha ugu wanaagsan, waxay la mid yihiin xaaladaha degdegga ah, iyo xisaabinta xooggooda dareenka ah iyo hawlaha maskaxda.
Waxaa jira faa'iido daro, iyo sidoo kale faa'iidooyin, kuwaas oo laga yaabo in ay keenaan dareenka maskaxda iyo horumarkooda. Haddii aynaan heleynin faa'iido halkii ay waxyeello ka iman lahayd dareenka maskaxiyan waxay ku xiran tahay qofka sida uu u yahay qaranka. Saameynaha saameynaya maskaxda ayaa ka imanaya dunya muuqata oo aan la arki karin. Iyadoo adduunkeena muuqata waxaa si joogta ah u ciyaaraya oo dhexgalaya xoogagga iyo awoodaha dunyada aan la arki karin. Dunida kasta, muuqata ama aan la arki karin, waxay leedahay jinsiyaddeeda iyo qolyaha naftooda u gaarka ah. Hay'adaha ka soo jeeda dunyada aan la arki karin waxay la xiriiraan nin iyada oo loo marayo dabiiciga maskaxeed, iyo, sida uu qabo dareenka maskaxeed, saameynaha aan muuqan iyo shakhsiyaadka ah ayaa u dhaqmi doona isaga oo ku dhiirigelinaya inuu tallaabo qaado. Jirooyinka iyo awoodaha waqtigan xaadirka ah ee lagu saleeyay in ay ku dhaqmaan nin iyada oo loo marayo dabiiciga maskaxeed. Aragtida maskaxeed iyo dhawaaqyada khayaaliga ah iyo dareenka qunyar-socodka badanaa waxay keenaan joogitaanka ciidamadan iyo kuwa kale. In kasta oo uu qofku ka baxsan yahay muuqaalkiisa jidhka oo xaddidan, oo uu ku dhajiyay oo laga ilaaliyay iyaga oo leh jir xoog leh, jir caafimaad leh, waa uu badbaado leeyahay, jidhkiisa jidhkiisu wuxuu u yahay isaga qalin. Laakiin waa in derbiyada qalcadda la daciifiyo, sida ay u dhaqmaan nacasnimada, ka dibna abuurista dimoqraadiga ah ee dunidan la arki karin ayaa jebin doona oo ka dhigi doona maxaabiis isaga. Awoodda hoose ee dabiiciga ah waxay u kaxayn doontaa dhammaan noocyada xad-dhaafka ah mana awoodi doono inay iska caabbaan midkood weerarradooda. Waxay isaga ka fuqi doonaan miro-dhalashadiisa, oo aan awoodin in uu xukumo jirkiisa jirka ah, isaga u gali rabitaankiisa, isaga oo diidaya jirkiisa, oo aan caqli gal aheyn isaga oo ka hooseeya heerka bahal.
Heerka xaadirka ah ee qofka caadiga ah ee horumarkiisa, dareenka maskaxeedku waa wax aan faa'iido u lahayn isaga oo ah sida Whiskey iyo qalabka astronomical ee Hindida Maraykanka ah. Faa'iidada dareenka maskaxeed iyo jimicsiyada maskaxdu waa inay dadka ka dhigaan dabeecadda, oo u baroorta saaxiibkiisa. Waxay yihiin qalabkii uu u adeegsan lahaa inuu arko oo fahmo faahfaahinta dabeecadda iyo dhammaan dabeecadaha dabiiciga ah. Dabeecadda maskaxda, haddii ay si fiican u tababaran tahay, waxay awood u siineysaa inuu si sahlan u bedelo oo uu hagaajiyo jirka jirkiisa iyo inuu koontaroolo. Dabeecadda maskaxeed, marka la xakumo iyo dhaqan ahaanba, wuxuu awood u siinayaa inuu adduunku u keeno dhaqaalaha dunidu ay ka soo ururin karto dunidan aan la arki karin, si loo helo nolol jireed dhammaan fikradaha la jecel yahay iyo hababka ugu fiican ee lagu kaydiyo dunida fikirka, dunida maskaxeed, iyo in ay dunida jismiga ah u diyaargaroobaan aqoonta ka timid adduunka ruuxiga ah.
Fikirka kuwa danaynaya maskaxiyan iyo horumarinta maskaxdu waa inay ka tagaan sababo ama ka dhigaan jilitaankooda sababaha ay u qabtaan jimicsiyada maskaxeed ee cusub iyo adduunka oo iyaga u furan. Tani waxay ka tanaasulaysaa sababo hal mar ah iyaga oo horumarinaya. Si aad u sameyso jilayaal cusub, faa'iido leh, isticmaalkooda waa in la fahmo oo la daryeelaa, illaa inta jiilalka cusub la og yahay oo la keeno kantaroolka sababaynta. Sababta waa in aan waligaa la dhaafin.
Dadka reer galbeedka, gaar ahaan Maraykanka, waxay sii wadi doonaan inay yeeshaan dareenka maskaxeed, laakiin waa inay qadariyaan oo ay yeeshaan faham wanaagsan oo ku saabsan isticmaalka iyo xadgudubyada dareenka maskaxda iyo horumarkooda, halkii ay hadda u ogolaan lahaayeen dabeecadooda maskaxeed muuqaal iyo kicin rabshad.
Xaaladaha hadda jira, nin caadi ah oo caafimaad qaba waa mid ka mid ah jirka jidhka jidhka (♎︎) si hoose ugu dhejisey maadada jirka ee asalkiisu yahay (♍︎) - mabda'a naqshadda ee qaabka jidhka jirka ee la dhisay.
Isku-dhafka iyo qaab-dhismeedka guud ee maskaxiyan badanaa way ka duwan yihiin kuwa caadiga ah ee caafimaad qaba. Miyirku waa mid ka mid ah maadada jirka ee astaamiyadeed ee jirka ah oo si dabiici ah u jilicsan jirka unugyada jidhka ee jirka, iyo qaabka circa, iyada oo la tixgelinayo xiriirka adag ee unugyada unugyada jidhka, waxay u nugul yihiin saameynta caalamka ku wareegsan taas oo u dhiganta dabeecadda.
Waxaa jira cilmi-nafsi dabiici ah iyo cilmi-nafsi oo ka mid ah horumarinta. Cilmi-nafsi ayaa ku dhasha sidan oo kale, iyada oo ay ku xiran tahay xaaladda jireed iyo maskaxeed ee waalidkood ama xaaladaha guud ee ka horeysa iyo waqtiga dhalashada. Dhammaan dadka maskaxda ku haya waa inay bartaan falsafadda ku saabsan dabeecadda maskaxda ka hor inta aysan isku dayin dhaqamada maskaxda. Habka ugu fiican ee lagula dagaallami karo khataraha nafsiga ah waa daraasadda falsafadda iyo nolosha nadiifinta.
Kuwa maskaxda ku dhashey waxaa laga yaabaa in ay sameystaan ​​nafsaani maskaxeed oo ay noqdaan kuwo maskaxiyan ayagoo noqdaan kuwo maskaxiyan ayagoo diidaya rabitaankooda iyo inay noqdaan kuwo xun oo ay siiyaan dhamaan saamayntooda ay dareemaan, ama ay daciifiyaan oo ay jebiyaan awoodaha iska-caabinta ee jirka xoolaha iyada oo loo marayo cunto khudradeed. Kuwani waa maskaxiyaadka aan mas'uuliyadda lahayn. Hase yeeshee, waxqabadyada cilmi nafsiyeed waxaa sidoo kale lagu hormarin karaa iyada oo loo hoggaansamayo ficilada mid ka mid ah sababaha, iyada oo la xakamaynayo rabitaanka cuntada iyo rabitaankiisa, iyada oo loo marayo fulinta shaqadiisa, ama horumarinta maskaxda iyada oo loo marayo xakameynta shaqooyinkeeda. Haddii koorsada dambe la raaco, jimicsiyada maskaxdu waxay u kori doonaan sida dabiiciga ah sida geedka caleemaha, burooyinkeeda, ubaxyada iyo miro xilliyada ku haboon. Kuwani waa maskaxda tababaran. Waxaa jira wax aad u yar.
Miisaanka maskaxiyan waa sida kan kale. Jidhka jidhku waa sida koolka ama guska, wajiyo badan oo isku mid ah sida dareenka isticmaalka; walxaha midabada leh iyo kuwa aan midab laheyn ee kudhaca muraayadda mar kasta oo ka mid ah kiiska sida fekerka iyo rabitaanada la tuuro oo ka muuqda jidhka dhalada ama jirkeeda, indhaha taas oo qaabka loo arko waa sida maskaxda ee jirka, iyo sirdoonka oo ku takoora waxa la arko waa sida nin dhabta ah. Sida kale oodoskopesku way kala duwanyihiin, sidaa darteed miyirku waxay ku kala duwanyihiin tayadooda iyo shakhsiyaadka kale ee ka shaqeeya kaleidoscope way kala duwan yihiin, sidaas oo kale kuwa sameeya dabeecadooda maskaxeed.
Erayada "psychic," "psychism" iyo "cilmi nafsiga" ayaa had iyo jeer la isticmaalaa, laakiin kala duwanaanshuhu ma aha mid si tartiib ah loo sawiray sidii ay noqon lahaayeen. Ereyga maskaxda ayaa ka yimid erayga Giriigga ee Psyche, gabar dhalanteed oo qurxoon, nafsadda bini'aadamka, oo la socday tijaabooyin badan iyo dhibaatooyin, laakiin ugu dambeyntii waxay noqotey mid aan dhimaneyn oo ay kula midoobeen Eros. Caqabada nafsiyan lafteedu waa nafta, iyo ereyada oo idil ee horeyba leh waa inay sameeyaan nafta; Sidaa daraadeed, maskaxiyan waa mid ka mid ah nafta. Hase yeeshee, maandhaafka sida loo isticmaalo -waxaa ka badan in la sameeyo ficilka jirka nafsiga ah ee shakhsi ahaaneed marka loo eego nafta saxda ah. Cilmi-nafsi waa cilmi nafsi, ama sayniska nafta.
Si kastaba ha noqotee, dareen gaar ah, si kastaba ha ahaatee, iyo sida uu u isticmaalo khuraafaadka Giriigta, maskax ahaanshaha qofku waa astaamaha jirka, ama mabda 'naqshadda qaabka (linga-sharira). Psyche waxaa la sheegay in uu yahay mid miisaan leh maxaa yeelay jirka jirkiisu hooseeya ee jirka ayaa sii soconaya ilaa iyo inta uu jirka jidhkiisa, ka horjoogsanayo. Aabaha, sidoo kale, Psyche wuxuu ahaa mid bini'aadam ah sababtoo ah shakhsiyaddii hore ee uu sidoo kale ahaa dhimasho. Jirka maadiga ah ee qaab nololeedkani waa wadarta isu-tagga iyo natiijada fekerka qofka ee noloshiisa hore-isla dareen la mid ah nolosha nolosheeda iyo rabitaankiisa waxay dhisayaan noloshiisa xiga jirka jirka ah iyo sida uu arintiisa jireed u noqon doono. Miyir-qabka ayaa jecel Eros, oo magaciisa loo adeegsado dareemo kala duwan. Eros kii ugu horeeyay ee jecel Psyche waa mabda 'rabitaan kaas oo aan la ogayn Psyche, oo la midoobeysa. Miyir-qabka jidhka mecilka jirka ee jirkiisu waa jir kaas oo dhammaan dareemada la dareemo sida raaxada iyo xanuunka dareenka; waa mid ka mid ah raaxeysiga raaxaysiga ah ee doonaya. Laakiinse sida qaabka cambaarta ah, ayaa u dhimanaya. Haddii, si kastaba ha noqotee, Psyche, jirka jirka ah ee muraayadda ah, nafta qofka dhimanaya, waxay ku guulaysan kartaa dhammaan dhibaatooyinka iyo tijaabooyinka lagu soo rogay, waxay ka gudubtaa methamorphosis oo la mid ah maskaxda iyo calaamadda, barkada, iyo oo loo beddelay qaab kale oo kala duwan: laga bilaabo dhimashada ilaa dhimasho. Tani waxay dhacdaa marka jirka jirka jilicsan ee qaabka isbedelka laga soo bilaabo geerida ku-meel-gaadhka ah si aan joogto ahayn; markaas ma sii jiri doonto dhimasho, waayo, way ka korodhay jidhka xoolaha jidhkiisa. Eros waxaa mararka qaar loo adeegsadaa in loo qoondeeyo qaybta maskaxda sare, ee shakhsi ahaaneed, kaas oo galaya jidhka jimicsiga jirka ah ee loo yaqaan 'linga-sharira' oo wuxuu ku jiraa jirka jirka. Waxay ku xiran tahay jacaylka maskaxda ee qaabka dhimashada, Psyche, jirka jidh ahaaneed, ee nafsadda, nafsadda shakhsi ahaaneed, ugu dambeyntii waa la badbaadiyey, ka soo sara kiciyay kuwii dhintay, oo samaystay mid aan la midoobin oo mideeysan. Noocyada kala duwan ee laga sameeyay magaca Maskaxaha iyo Eros iyo qarsoodiga xiriirka Eros ilaa Psyche, nafta shakhsi ahaaneed ee bini'aadamka ah, ayaa si cad u fahmi doona sida mid ka mid ah uu ku yaqaan dabeecadiisa gaarka ah wuxuuna bartaa inuu kala soocdo oo la xidhiidho qaybaha kala duwan qaybaha iyo mabaadiida taas oo isaga ka dhigaysa isku dhiska oo uu yahay. Daraasad ku saabsan cilmi-nafsiga ayaa cadeeyn doonta nin in uu ka kooban yahay Maskaxiyo badan, ama Nafaqo.
Waxaa jira afar nooc oo cilmi-nafsi ah: maskaxda jireed, maskaxiyan maskaxda, maskaxda maskaxda, iyo maskaxiyan ruuxi ah, oo matalaya jilitaanka calaamadaha la xiriira libra, (♎︎) muraayada-scorpio, (♍︎-♏︎), leo -shabaab, (♌︎-♐︎), kansar-madax-xanaan (♋︎-♑︎). Afartan nooc ayaa lagu muujiyay oo sharxay Word The, Vol. 6, No. 3, bogagga 4-7. Noocyada kala duwan ee maskaxda ku jirta, joodajiyadu waxay u taagan tahay nin.
Mid ayaa laga yaabaa in uu kiciyo dabiiciga maskaxeed (libra, ♎︎) isaga oo jimicsiga jirkiisa, cunto xumo, soonka, daaweynta jireed iyo jirdil xumo jirka, sida qaadashada khamriga, iyo daroogada, isagoo xanuunka keena , by calanka, ama by xad-dhaafka galmo xad-dhaaf ah.
Dabeecadda maskaxeed ee maskaxda ah (xuubka-scorpio, ♍︎-♏︎) waxaa lagu hormarin karaa adigoo si qayax leh u eegaya meel bayaan ah, ama adigoo keligiis fadhiya mugdiga maskaxda ee maskaxda, ama adigoo riixaya indhaha , ama ayadoo la adeegsanayo maan-dooriyaha, ama lagu dhejiyo foorno gaar ah, ama iyadoo la gubayo foorno gaar ah, ama iyadoo la adeegsanayo guddi fara badan, ama ka soo qayb galka safaarada, ama soo noqnoqashada iyo farriinta erayada qaarkood, ama neefta, neefsashada iyo ka qaadista neefta.
Dabeecadda maskaxda maskaxda (leo-sagittary, ♌︎-♐︎), waa in lagu hormariyaa habdhaqan maskaxeed, sida samaynta sawirrada maskaxda, iyadoo la siinayo qaababka maskaxda ee maskaxda maskaxda, iyo xakamaynta dhammaan hawlaha maskaxda fikirka.
Horumarinta dabiiciga maskaxeed (kansar-madax-xanaan, ♋︎-is) waxaa keena xakamaynta hawlaha maskaxda marka qof uu awood u leeyahay in uu isku aqoonsado caalamka ruuxi ah ee aqoonta, oo dhammaanba wejiyada kale ee dabiiciga ah ayaa la fahamsan yahay.
Gaaritaanka, awoodaha ama kulliyadaha ay soo saareen heerarka kor ku xusan ee maskaxdu waa:
Marka hore: caqiidada iyo ku dhaqanka ragga iyo haweenka nafta ah, ama galmada lagu haysto kiniisada dhabta ah ama succubi, ama caqiidada jirka mid ka mid ah qayb caan ah.
Labaad: Horumarinta Clairvoyance ama Clairauence, sida dhexdhexaadinta, ama dhexdhexaad ah, ama dhexdhexaad dhexdhexaad ah, ama isqabqabsi.
Seddexaad: fakarka aragtida labaad, ama cilmi nafsiga, ama taleefanka, ama fiilooyinka, ama sirta, ama maskax xoog leh-faca-dhismeedka muuqaalka.
Qodobka afaraad: Gaaritaanka aqoonta, ama fakarka waxsii sheegista, ama awooda lagu abuurayo caqli-awood u leh.
The Word Foundation, Inc. | Daabacayaasha Fikirka iyo Dareenka
Tan iyo 1950